Kis & Kav ကီးရတနာသိုက် - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်များ » Virus & Anti-virus ပိုင်းဆိုင်ရာ
Kis & Kav ကီးရတနာသိုက်
23-02-2009, 08:46 AM
ပို့စ် 33 ခုအတွက် 107 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Kis & Kav ကီးရတနာသိုက်
အစ်ရဲ့ KIS ကို Disable လုပ်ပြီးဖွင့်လျှင် ပွင့်သွားပါလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့် Ver-8 အတွက်ဆိုတဲ့ကီးက ဗားရှင်း 8. ဘယ်လောက်ကို ပြောတာလဲ မသိဘူးနော်။( 8.???.???.??? ) ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မိတဲ့ Version 8 နှစ်ခုကတော့ အစဉ်မပြေဘူး ဖြစ်နေလို့။ ကီးထည့်လိုက်ရင် ဒီဗားရှင်း အတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ လာပြောနေလို့။ Kasper 2009 ဆိုပြီး စထွက်စ ဗားရှင်း တုန်းကတော့ အစဉ်ပြေပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Upgrade လုပ်ပြီးကတည်းက အဲ့ဒီလို ဖြစ်တော့တာပဲ။ ဘယ်ဗားရှင်း ( 8.??? )ကို သုံးရင် အစဉ်ပြေနိုင်မလဲ မသိဘူး။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Computer အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 10 ခုအတွက် 22 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း ဒီဆိုက်ကိုသုံးနေတဲ့ယူဆာတစ်ယောက်ပါ။ တစ်ကယ်က 8.???? ဗားရှင်းတူမတူကသိပ် အရေးမကြီးဘူး ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာက kav လား kis လားဆိုတာနဲ့ .. main version .. 8.XXX or 7.xxx အဲဒါကပိုအရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်..။ တစ်ခါတစ်လေ တခု နှစ်ခု နဲ့ အဆင်မပြေတတ်ပါဘူး။ ဒေါင်းလုပ်ပြီး ထည့်ထည့်ကြည့်ရပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ konge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by konge
07-05-2009, 05:03 PM
တည်နေရာ: ကွန်ပျူတာရှေ့ တ&
ပို့စ် 85 ခုအတွက် 235 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ငှက်လဲ ဒီဆိုဒ်ကနေပဲ ယူပြီး တရားအားထုတ် တရုတ်အားထားနေရတာပဲ... အရင်တလောက ဘာကီးမှထည့်မရဘဲ အားလုံး ဘလက်လစ်စ်ဖြစ်နေလို့ဒီအတိုင်း ဘလက်လစ်နဲ့ပဲ မှေးသုံးနေတာ..ခု ဒီနေ ထပ်ဒေါင်းတော့ ရသွားပါပြီ..ကီးမဒေါင်းခင် ကက်စပါကို ခဏ ဖြုတ် ၊ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ကက်စပါနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကီး တော်တော်များများကို ဖိုင်တစ်ဖိုင်ဖွင့်ပြီးဒေါင်း..... ပြီးတာနဲ့ကက်စပါကိုပြန်ဖွင့်၊ ကီးအဟောင်းကို ဒလိ လုပ် ...ဒေါင်းထားတဲ့ ကီးတစ်ခုမရ နောက်တစ်ခုထပ်ထည့် ..ရပြီဆိုရင် အပ်ဒိတ်လုပ်...ဘလက်လစ် ထပ်ဖြစ်ရင် အရင်ဒေါင်းပြီးသားရှိတဲ့ကီးထပ်ထည့်ကြည့် မရရင် အပေၞကလို အစကနေပြန်ဒေါင်း .ဒီလိုပဲ သုံးနေရတာပေါ့..ကိုယ်က ကီးအလကားယူသုံးနေတာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ အပင်ပန်းခံရတာပေါ့နော...
ငှက်သုံးနေတာ KIS7ပါ ငှက်ဒီနေ့ ဒေါင်းပြီးသား ကီးတွေပေးလိုက်ပါတယ်..KIS7နဲ့KAV7ကီးတွေပါပါတယ်..လိုအပ်တဲ့ မိသားစုဝင်များ သုံးနိုင်အောင်ပါ.
i file နဲ့ဒီမှာဒေါင်းပါ
:ice:[COLOR="Magenta"]အပူအပင်ဟူသမျှ ကင်းဝေးပါစေ..[/COLOR] [SIZE="4"][COLOR="Cyan"]zinyaw@myanmarfamily.org[/COLOR][/SIZE]
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ဇင်ယော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စိုးလေး, အီဖေကို, မြတ်ဘုန်းမို, kkawave
Find More Posts by ဇင်ယော်
19-08-2009, 05:50 PM
ကီးလိုချင်သူများအတွက် ၁၉-၈-၂၀၀၉ နေ့မှာတင်ထားတဲ့ ကီးအသစ်တွေပါ။ အသုံးလိုမဲ့ ဖိုရမ်မှ ညီအကိုများ အောက်မှာ မိမိနှစ်သက်ရာချလိုက်ပါ။
Kaspersky anti-virus7key
Kaspersky anti-virus 8 key
Kaspersky anti-virus9key
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ဖြိုးယံလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
တောဂေါ်လီ, ဝေဝေ, bonge, phyomyintthein, thurein
28-08-2009, 01:15 PM
ပို့စ်5ခုအတွက်9ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - ကွန်ပျူတာ security ပိုင်းကို ခြိမ်းခြေƞ
kaspersky keys တွေပါ။ မီဒီယာဖိုင်းယားမှာ တင်ထားပေးပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ nyizwe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by nyizwe
19-09-2009, 09:06 AM
ပို့စ် 143 ခုအတွက် 225 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အခု www.kavkiskey.com ကလည်းမရတော့ဘူးဗျ...
ကျွန်တော်က kav7တင်ထားတာပါ..
[COLOR="DarkGreen"][SIZE="5"]ဘ၀ဆိုတာ မာတိကာ အတိုင်း ဘယ်တော့မှဖြစ်မလာဘူး.....[/SIZE][/COLOR]
Find More Posts by လူမုန်း
21-09-2009, 10:46 AM
တည်နေရာ: pyin oo lwin
ပို့စ် 110 ခုအတွက် 411 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဟုတ်တယ်ဗျို့ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ မသိဘူး ....http://www.kavkiskey.com ကဖွင့်လို့မရတော့ဘူး.....ငိုချင်တယ်...
အခုတောင် trial လေးနဲ့ သုံးနေရတယ်...ကယ်ကြပါဦး....
[COLOR="Blue"][SIZE="5"]ဘ၀ဟူသည်အချို့ လူများအတွက်ရယ်မောဖွယ်မျှသာဖြစ်သော်လည်းအချို့ လူများအတွက် ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ တရပ်အဖြစ်ခံစားကြရသည်[/SIZE][/COLOR]
Find More Posts by oasislove
21-09-2009, 03:38 PM
ပို့စ် 200 ခုအတွက် 805 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by oasislove
ကူညီကြပါဦး။ ကျွန်တော်လည်း Kav ကလွှဲလို့ ဘာမှ မသုံးချင်ဘူး။ အခုကျွန်တော့်ရဲ့ Kav9 က ၁၃ ရက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်။
Find More Posts by အောင်လွင်ဦး
22-09-2009, 04:56 PM
ပို့စ် 284 ခုအတွက် 1,435 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အဟီး ကီးရှိတဲ့သူများ လက်တို့ကြပါဦး . လိုက်ရှာတာလဲ ခေါင်းပါ ပူလာပြီ .. လက် ၁၀၀ ကျော်ကျန်သေးတာကို ဒီနေ့ကျမှ ဘလက်လစ်ထဲ ၀င်သွားတာ ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းကို မသိတော့ဘူး . ရှိတဲ့သူများ . ရှယ်ကြပါဦး .
Visit ညီနေမင်း's homepage!
Find More Posts by ညီနေမင်း
23-09-2009, 11:16 AM
ပို့စ် 17 ခုအတွက် 80 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
လုပ်ကြပါအုံး www.kavkiskey.com ကသုံးမရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အခြား websit လေးများရှိရင်ကူညီပါအုံး။
Find More Posts by အောင်စည်သူ
23-09-2009, 07:41 PM
ဘာသာပြန်ဖို့ အပေါ်က ဆိုဒ်ထဲအရင်ဝင်ပြိး တရုတ်webpage ကိုဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်။ kav,kis key မျိုးစုံရှိပါတယ်။
ကျွန်တော့် Kav9 ကတော့ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ကျန်တာတွေ စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ အောင်လွင်ဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇီးရိုး, အောင်စည်သူ, bonge, wahgyi
23-09-2009, 09:16 PM
ပို့စ် 14 ခုအတွက် 42 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးပါ... ခင်ဗျာ.. ဆက်လက်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ အပ်တူဒိတ်ဖြစ်တာလေးတွေလည်း ဖော်ပြပေးပါဦး
Find More Posts by lumyound
30-09-2009, 04:15 PM
ကဲအားလုံးအတွက် တစ်လစာလောက် ရှိပါတယ် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ . ဒါကုန်ရင် ထပ်ပြီးတင်ပေးပါဦးမယ် .
အားလုံးအတွက် ပေါင်းပြီးတင်ပေးထားပါတယ် .
Download kaspersky (7,8,9)
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ညီနေမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
"KAV" v7 v8 and v9 "Keys": Updated on 1st October' 2009 အတွက် အောက်မှာပါ
Download the "KIS" v7 v8 and v9 "Keys": Updated on 1st October' 2009
Last edited by ညီနေမင်း; 03-10-2009 at 12:46 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ညီနေမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ်5ခုအတွက်6ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်စက်က kasper7Install လုပ်တာဝင်လို့လဲ
အဲဒီ key ကဘယ်မှာသွားသွင်းရမလဲ
Last edited by tu tu; 11-10-2009 at 10:07 AM.. Reason: merge posts
Find More Posts by ကြက်ရိုး
ပို့စ် 214 ခုအတွက် 840 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဒီလင့်မှာလဲ သံလုံငယ် တင်ပေးထားပါတယ်။ Kaspersky Keys Downloader_v1.0 တဲ့ ။ အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်။
[COLOR="Red"][marquee]Genius is 1 percent inspiration and 99 percent perspiration.[/marquee][/COLOR]
Last edited by သက်နိုင်; 11-10-2009 at 04:16 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ သက်နိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by သက်နိုင်
26-10-2009, 02:59 PM
တည်နေရာ: မင်္ဂလာဒုံဈေး၊ ရ&
ပို့စ် 53 ခုအတွက် 332 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Kaspersky Keys Downloader_v1.0
Kaspersky key တွေအတွက် အားလုံးလည်း တော်တော်ဒုက္ခရောက်ကြမှာပါ။
အောက်က ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းပြီး double-click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ပြထားတဲ့အတိုင်း ၀င်းဒိုးလေးတစ်ခု ပေါ်လာမယ်။ Get updates ဆိုတဲ့ ခလုပ်လေး နှိပ်လိုက်။ key အမျိုးအစားနဲ့ update လုပ်ပေးထားတဲ့နေ့ကို တွေ့ရမှာပါ။ မိမိသုံးမယ့် ကီးကို click တစ်ချက်ပေးပြီး Download ကိုနှီပ်လိုက်တာနဲ့ သိမ်းမယ့် နေရာရွေးခိုင်းပါတယ်။ ဇစ်ဖိုင်နဲ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည်ကြည့်လိုက်ပါ။ တစ်မျိုးအတွက် အနည်းဆုံး ၇ ခုလောက် ရပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ်နည်းပါး update လုပ်ပေးတဲ့အတွက် Kasper key အတွက် စိတ်မညစ်ရတော့ဘူးပေါ့ ....
တစ်ခုတော့ သတိထား ... သူ့ဖိုဒါကို မဖွင့်ခင်ထဲက Kaspersky ကို exit ပေးထားလိုက်။ ကီးရပြီးရင် key downloader ကို ပိတ်လိုက်။ ပြီးမှ kaspersky ကို ပြန်ဖွင့်။ မဟုတ်ရင် unwanted software ဆိုပြီး ကိုက်သွားလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် ပေးချင်တာသက်သက်တည်းပါ ဘာမှမတတ်လို့ပါ။ တင်ပြီးသား ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ ခွင့်လွှတ် သည်းခံပေးကြပါ။ ကျွန်တော်ဖိုရမ်မှာ တစ်ခါမှမမျှဝေဘူးလို့ အခု ရှာတွေ့တာလေး မျှဝေလိုက်တာပါ
သံလုံငယ် ဆိုဒ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်
Last edited by aung lwin; 26-10-2009 at 04:57 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ aung lwin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒဿဂီရိ, ဖယောင်း, blackNwhite, nyinyi mt, yakhailay
aung lwin ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by aung lwin
26-10-2009, 04:20 PM
Kyaw Nay Soe
တည်နေရာ: Kolkata in India
ပို့စ် 67 ခုအတွက် 362 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
တင်ပေးထားတဲ့ ဆိုက်မှာ ဒေါင်းလို့မရဘူး အဆင်ပြေရင် ပြန်တင်ပေးပါအုံး စိတ်ဝင်စားလို့ပါ သုံးလဲသုံးချင်ပါတယ်
[COLOR="Red"]ပေးသောလက်သာ ဖြစ်ပါရစေ။[/COLOR] :1:
Kyaw Nay Soe ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Kyaw Nay Soe
26-10-2009, 04:25 PM
အစ်ကိုရေ ဘယ်လိုအဆင်မပြေတာလဲဗျ ပြန်ဒေါင်းကြည့်ပါအုံး ကျွန်တော် စမ်းကြည့်တာရပါတယ် kaspersky ရှိနေရင်တော့ ပိတ်ထားမှရမှာနော် မပိတ်ထားရင် သူက ဗိုင်းရပ်ဆိုပြီး ဒေါင်းလို့မရဘူးဗျ အစ်ကိုပြန်စမ်းကြည့်ပါအုံး
26-10-2009, 04:49 PM
Last edited by aung lwin; 26-10-2009 at 04:51 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ aung lwin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဘယ်လိုမှ မရပါ....link များကလည်းဖွင့်လိုမရ...ကီးရှာပေးတဲ့ ဆော့ဝဲ ကလည်း မရ ကူညီကြပါ။
Find More Posts by အညာသားလေး၂၃
02-11-2009, 09:55 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Apr 2007
တည်နေရာ: Nay Pyi Taw
ပို့စ် 301 ခုအတွက် 928 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Kaspersky Keys Downloader_v1.0 ကို ပြန်တင်ပေးလိုက် ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုသံလုံငယ် ရဲ့ ဆိုဒ်ကနေ ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
http://www.thanlonnge.com/ မှာလည်း သွားယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ phyothuhein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by phyothuhein
12-11-2009, 01:16 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Nov 2009
Originally Posted by maJunior
KAV ဆိုတာကတော့ Kasperaky Anti Virus ဖြစ်ပြီး
KIS ဆိုတာကတော့ Kasperaky Internet Security လို့
ကျွန်တော် နားလည်သလောက်လေး မေးပါရစေခင်ဗျာ ..
kav ( Kispersky Anti Virus )ကို stand alone computer တွေမှာသုံးပြီး
ုkis ( Kispersky Internet Security )ကို internet သုံးတဲ့ computer တွေမှာ ပိုပြီးသုံးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါ တယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက် မှန်မမှန်သိလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး အမတွေ ၊ အကိုတွေ ကျွန်တော့် ကို နည်းနည်းလောက် ရှင်းပြပေးကြပါခင်ဗျာ။
Find More Posts by အီဖေကို
28-11-2009, 05:20 PM
Kaspersky Keys Downloader_v1.0 ရဲ့ ကီးတွေက active မဖြစ်တော့လို့ ကူညီပေးကြပါဦး..
ကျွန်တော် ဟာက kis 8 ပါ
30-11-2009, 04:24 PM
oasislove ရေ ကျွန်တော် ဒီမှာ တင်ပေးထားတာတော့ ရှိတယ်ခင်ဗျ။
25-11-2009 အထိတော့ activate ဖြစ်နေတုန်း ပါပဲခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီထဲက key တစ်ခုနဲ့အဆင်ပြေနေတုန်းပဲ ခင်ဗျ။
12-12-2009, 03:32 AM
ပို့စ် 101 ခုအတွက် 315 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျနော့်ကိုလဲ kav &kai ၂၀၁၀လိုင်စင် ကီးလေးရှိ၇င်ပေးကြပါအုံးဗျာ
ကျနော့်မှာ လိုင်စင်ကီးက ဘလပ်လစ်ဖြစ်သွားလို့ပါ
Find More Posts by sky4ster
12-12-2009, 06:04 AM
sky4ster ရေ ဒီသရက်က ကီးရတနာသိုက်အကြောင်းဆွေးနွေးတဲ့နေရာပါ။ လိုချင်ရင် တောင်းဆိုရန် ကဏ္ဍမှာသွားတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
အထက်ကလင့်မှာ ကျွန်တော့်ထိုးမြဲလက်မှတ်အောက်မှာ ၄ ရက်လောက် တစ်ခါ အပ်ဒိတ်လုပ်တင်ပေးပါတယ်။ ဗားရှင်းမျိုးစုံပေါ့။ အဆင်ပြေပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
15-02-2010, 10:53 PM
ပို့စ် 87 ခုအတွက် 287 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဦးဦးရဲအောင် ခင်ဗျာ --
ဦးဦးတင်ထာပေးတဲ့ Kis & Kav တွေက black lisk ဖြစ်နေပါပြီး
Visit စိုးလေး's homepage!
Find More Posts by စိုးလေး
15-02-2010, 11:12 PM
Myo Min Zaw
ပို့စ် 491 ခုအတွက် 3,062 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by စိုးလေး
ကျနော်လည်း ကိုရဲအောင်ကို အားဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ သတိရရင်တော့ တင်ပေးနေတာပဲ
Last edited by Myo Min Zaw; 15-02-2010 at 11:18 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ Myo Min Zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စိုးလေး, ဇီးရိုး, bonge
Myo Min Zaw ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Myo Min Zaw
10-05-2010, 12:39 PM
ပို့စ် 62 ခုအတွက် 221 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
kis 2010 key ရှိရင်ပေးကြပါဦး
Find More Posts by ဟိန်းဟိန်းမြတ်
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 10:03 AM